Doogee S98 | အသစ်ထွက်ရှိမည့်ရက်နှင့် စျေးနှုန်းကို ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိပြီးဖြစ်သည်။ သတင်း ဂက်ဂျက်များ
Ignatius ခန်းမ | 18/03/2022 13:16 | မိုဘိုင်း
မတ်လ 28 ရက်နေ့တွင် Doogee S98 သည်စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူ Doogee ထံမှ အကြမ်းခံစမတ်ဖုန်းအသစ်အဖြစ်လူသိများ အကြမ်းခံဖုန်း၊ မတ်လ 239 မှ ဧပြီလ 28 ရက်အတွင်းသာရရှိနိုင်မည့် အထူးမိတ်ဆက်စျေးနှုန်း $1 ဖြင့်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤစက်ပစ္စည်း၏ ပုံမှန်စျေးနှုန်းမှာ $339 ဖြစ်သောကြောင့် မိတ်ဆက်ကမ်းလှမ်းမှုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကို ဒေါ်လာ 100 ချွေတာနိုင်စေတယ်။. ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်း၏ဝဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့်4Doogee S98 အတွက် မဲနှိုက်ရာတွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ မတ်လ 28 မှ ဧပြီလ 1 ရက်နေ့အထိ၊ Doogee S98 ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ 239 ဒေါ်လာ en AliExpress y doogeemall.
1 Doogee S98 က ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘာပေးသလဲ။
1.4 ဘက်ထရီ3ရက်အထိ
2 Doogee S98 ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
Doogee S98 က ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘာပေးသလဲ။
RAM ကို 8GB LPDDRX4X
သိုလှောင်နေရာ 256 GB USF 2.2 နှင့် microSD ဖြင့် တိုးချဲ့နိုင်သည်။
ဖန်သားပြင် 6.3 လက်မ - FullHD + ရုပ်ထွက် - LCD
ရှေ့ကင်မရာ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု 16 အမတ်
နောက်ကင်မရာများ 64 MP ပင်မ
20 MP ညအမြင်အာရုံ
ဘက်ထရီ 6.000 mAh သည် 33W အမြန်အားသွင်းစနစ်နှင့် 15W ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်ဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အခြားသူများကို NFC – Android 12 – အပ်ဒိတ် ၃ နှစ်
Doogee S98 ကို ပရိုဆက်ဆာက စီမံခန့်ခွဲပါတယ်။ Helio G96 MediaTek မှ ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် microSD ကတ်ကို အသုံးပြု၍ တိုးချဲ့နိုင်သော သိုလှောင်မှု 8 GB RAM နှင့် 256 GB သိုလှောင်မှုတို့ကို တွေ့ရှိရသည်။
Doogee တွင် မျက်နှာပြင် ၂ ခု ပါဝင်သည်။ ပထမ နှင့် အဓိက သည် အရွယ်အစား ရှိသည်။6လက်မ. ဒုတိယစခရင်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်။ ကျောဘက်မှာ အရွယ်အစား 1,1 လက်မ ရှိပါတယ်။
ဒီ back screen နဲ့ အချိန်ကိုမြင်နိုင်တယ်၊ တေးဂီတဖွင့်ခြင်းကို စီမံပါ၊ ခေါ်ဆိုမှုများကို ဖြေကြားပါ၊ ဘက်ထရီအဆင့်ကို စစ်ဆေးပါ။ငါတို့လက်ခံရရှိသောစာများကိုကြည့်ပါ၊
ကင်မရာသည် သုံးစွဲသူများ အများဆုံး ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် ကဏ္ဍများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် Doogee ရှိ အမျိုးသားများသည် ၎င်းကို အထူးအာရုံစိုက်ခဲ့ကြသည်။ စက်၏နောက်ဘက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့သည်။3မှန်ဘီလူး:
8 MP wide angle နှင့်
Sony မှ ဖန်တီးထားသော 20 MP ညအမြင်အာရုံခံကိရိယာ။
ရှေ့ကင်မရာကို Samsung က ဖန်တီးထားပြီး၊ ၄၈ MP Resolution
ဘက်ထရီ3ရက်အထိ
တစ်ဦးနှင့်အတူ 6.000 mAh ဘက်ထရီDoogee S98 သည် စက်ကို အလယ်အလတ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ၂ ရက်မှ ၃ ရက်အထိ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည်။
ဒါဟာနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ် 33W အထိ အမြန်အားသွင်းပါ။ပါဝါတူညီသော အားသွင်းကြိုးပါ၀င်ပါသည်။ ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်နှင့်လည်း တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Doogee S98 ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
Doogee S98 အသစ်ကို ဆောင်းပါးမိတ်ဆက်တွင် လင့်ခ်များဖြင့် Aliexpress နှင့် Doogeemall တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ မိတ်ဆက်ပရိုမိုးရှင်းပြီးဆုံးသည့်အခါ ဈေးနှုန်းမှာ $339 ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင့်စီးပွားရေးက ခွင့်မပြုပါက၊ ထုတ်လုပ်သူမှ ၎င်း၏ဝဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့် မဲနှိုက်ပေးသည့်4Doogee S98 ကို အထက်ဖော်ပြပါ လင့်ခ်များဖြင့် သင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » Doogee S98 အသစ်၏ စတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့် ဈေးနှုန်းကို ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိပြီးဖြစ်သည်။
Roborock သည် အလယ်အလတ်တန်းစားသို့ မိမိကိုယ်ကို ဗလာဖြစ်စေသည်။